မယ်သံ: သာသနာ့ရောင်ခြည် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း(စလေမြို့) အတွက်အလှူခံခြင်း
richelle co July 30, 2012 at 4:53 PM
slym July 31, 2012 at 9:54 AM
a nice community service post....I'll try to pursue our chairman to donate our group firm. Hope he will agree with me.
Khin Maung Oo July 31, 2012 at 4:17 PM
i just sent sms u
Thandar Lwin August 2, 2012 at 5:24 PM
Thanks ( Ko MZ)
Thandar Lwin August 2, 2012 at 5:41 PM
မုဒိတာ ပွားနိုင်ရန် ..ယနေ့ (2.8.2012) အထိ အလှူခံ ရရှိထားသော စာရင်း
ကိုဌေးအောင် (ဒိန်းမတ်) - S$75.00
ကိုခင်မောင်ဦး+ မသန္တာလွင် - S$50.00
မချစ်ကြည်အေး - S$50.00
ဦးဌေးဝင်း (စလေ) - S$50.00
ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်ကြည်ကြည်ဆွေ အားရည်စူးပြီး ဦးတင်ထွန်း မိသားစု - S$30.00
ကိုမြင့်ဇော် - S$30.00
ပိုးပိုး - S$30.00
ကိုလင်းအောင်ကို နှင့် မိသားစု S$30.00
မ၀င်းဝင်းမြင့် - S$20.00
ကိုဇော်လတ် (စလေ) S$10.00
စုစုပေါင်း S$ 425.00 ပြီး
ဦးထွန်းဇော် ဒေါ်နုနုဝင်း ဘက်စုံပဒေသာပင်တပင် အတွက် -S$15.00
မယဉ်ယဉ်ပြုံး ဆေးပဒေသာပင် -S$15.00
ကိုဇေယျာဦး ပညာရေးပဒေသာပင် -S$15.00 တို့ ဖြစ်ပါတယ် ရှင် ။
ကလေးများကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် သာဓု သုံးကြိမ် ခေါ်ဆိုရပါတယ် ရှင် ။
Thandar Lwin August 12, 2012 at 9:04 PM
မုဒိတာ ပွားနိုင်ရန် ..ယနေ့ (12.8.2012) အထိ အလှူခံ ရရှိထားသော စာရင်း
သာသနာ့ရောင်ခြည်အဖွဲ့ (စကာင်္ပူ) - S$150.00
ဘလော့ဂါ ဂျွန်ဝမ်းမင်း မိသားစု - S$30.00
မူလလက်ဟောင်းကလူသစ် မိသားစု S$30.00
ဦးလှမင်း+ဒေါ်ယမင်းဝင်းသန့်မိသားစု - S$370.00
မအိခိုင် - S$50.00
ကိုလှဝင်းရှိန်+မ၀င်းခိုင် - S$10.00
ကိုသန်းဇော်ဦး+မဇင်ဇင်မြင့် - S$10.00
ဒေါ်အေးအေး(ရန်ကုန်) - S$20.00
စုစုပေါင်း S$ 1195.00 ရရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ။
ကလေးများကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် သာဓု သုံးကြိမ် ခေါ်ဆိုရပါတယ် ရှင်
Thandar Lwin August 12, 2012 at 9:06 PM
ကလေး ကျောင်းဝတ်စုံ အတွက် S$ 1195.00 နှင့် ပဒေသာပင် အတွက် S$ 60.00 စုစုပေါင်း S$ 1255.00 ရရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ကူးကူးလှိုင် November 13, 2012 at 6:50 PM
သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်သွားပါတယ်ရှင်...